Global Voices teny Malagasy » “Mangataka fandraisana andraikitra amin’ny fiheverana indray ny vaovao momba ny famonoana vehivavy izahay” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Jona 2018 4:49 GMT 1	 · Mpanoratra Nohelia Raissa Fernández Sánchez Nandika Liva Andriamanantena
Ny Tetikasa Reframed Stories  dia mangataka amin'ny olona mba hamaly ireo lohahevitra manjaka amin'ny fitantaram-baovao miresaka ny vondrom-piarahamonina misy azy. Ireny tantara ireny dia eritreritry ny olona izay matetika isoloan'ny hafa tena. Noforonina ny zavon-teny amin'ny fampiasana ny sehatra Media Cloud , fitaovana fanadihadiana tahiry izay manadihady ny angona media amin'ny fotoana iray manokana, ahafahan'ny mpandray anjara mandinika sy mifanakalo hevitra ny santatry ny fijery amin'izay anehoana azy ireo ao amin'ny fampitam-baovao. Mitandrina tsara ny tetikasa mba tsy hanao fehinkevitra maimaika momba ny lahatahiry, fa io no fiaingana miteraka sehatra hifanakalozan-kevitra amin'izay azon-dry zareo atao hamolavolana ny fampitam-baovaon-dry zareo manokana amin'ny alàlan'ny media nomerika.
Mpitantana sy mpitondrantenin'ny vondrom-piarahamonina ao Cochabamba, Bolivia i Nohelia Raissa Fernández Sánchez. Ity manaraka ity dia ny fanadihadiana nataon'i Nohelia Raissa momba ny zavon-teny manondro ny voambolana hoe ” feminicidio” (famonoana vehivavy).
Teny manjaka ao anatin'ny lahatsoratra miisa 1.540 nivoaka teo anelanelan'ny volana May 2017 sy May 2018 manonona “feminicidio” ao anatin'ny angona Media Cloud roa ao amin'ireo seha-mpampitam-baovao miteny espaniola ao Bolivia. (raha hijery sary lehibe kokoa )
Ny zavatra tiako hovakiana, ho re, na hita aorian'ny vaovao momba ny famonoana vehivavy dia ny fikarohan'izy ireo sy ny “fahazoana ny rariny”, ary azo atao ny manameloka ny famonoana vehivavy.
[Tiako ho hita] ny fanasongadinana ny fanadihadiana amin'ny endrika fanarahana ny raharaha. Ary ny fitsarana ihany koa dia lasa [matoam-b]aovao avy amin'ny fomba fijerin'ny lehilahy sy ny vehivavy, manaja ny politikam-panjakana ary manatanteraka ny politika amin'ny alalan'ny vatsy voatondro ho an'ilay niharam-boina, izay afaka manampy azy amin'ny fampiharana ny zony.
Mangataka fandraisana andraikitra amin'ny fiheverana ny vaovao [momba ny famonoana vehivavy] izahay, izay mihoatra noho ny zava-nitranga sy ny tarehimarika. Izany dia momba ny vehivavy izay nijaly sy maty noho ny herisetra. Raha sady tiantsika ireo niharam-boina handray ny fikarakarana haingana eo amin'ny fitadiavana ny rariny, dia manantena ihany koa isika fa hisy ny fanangonam-baovao sy ny fahitana ity olana ity any amin'ny faritany, ary hilaza sy hanatanteraka ny andraikitra ara-panabeazana sy ny fampahalalana momba ny zon'ny vehivavy ny filazam-baovao.
Mikendry ny hanova ny zava-misy ny zavon-teny, saingy miaraka amin'ny fandraisan'anjaran'ny fampitam-baovao. Tiantsika ary mijoro isika mba hahatonga ireo teny toy ny hafangainana, fiarovana, fanoloran-tena ary fitoviana ho hita ao amin'ny vaovao fa tsy ho idealintsika fotsiny ihany.
Ao anatin'ny andiany Rising Frames novolavolaina ho anisan'ny hetsika nokarakarain'i Raisa Valda Ampuero avy ao amin'ny Warmi.Red  sy Fabiola Chambi ity lahatsoratra ity. Nanampy tamin'ny fikarakarana atrikasa iray izy ireo natao ny 30 May 2018 tao Cochabamba, Bolivia izay namory solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa mba handinihana ny fomba isehoan'izy ireo na ny olana atrehan'izy ireo ao amin'ny angona media Bolivia ary hamorona tantara ho setrin'izany fisehoana izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/04/120517/
 raha hijery sary lehibe kokoa: https://rising.globalvoices.org/files/2018/05/transexualnube.png